🥇Ezona Brokers zoRhwebo lweCopper ngoDisemba 2021 | Isikhokelo sokuRhweba sasimahla sePro!
Abarhwebi abaShishina ngokuPhambili beCopper 2021
I-Copper ihlala ithathwa njengeyona nto iphakamileyo ngabatyali mali xa kuthelekiswa nezinye izinyithi ezikhazimlayo- ezifana negolide nesilivere.
Nangona kunjalo, sisitshixo sesithathu esithengiswa kakhulu kwihlabathi jikelele kwaye sidlala indima ebalulekileyo kwinkqubela phambili yelizwe eliphuhlileyo. Iipropathi ezininzi zobhedu, zombini kubunye bayo okanye ngokudibeneyo, ziyenza ibe sisinyithi esinezinto ezininzi.
Ukuqhutywa kwayo okuphezulu kobushushu kunye nombane, ukungahambelani, kunye nokumelana nokubola kwenza ukuba ibe yinto ephambili yezicelo zorhwebo, isithathu kuphela emva kwentsimbi kunye nealuminium. Ukujonga indima yayo kwindaleko yesithuthi sombane, iingcali zilindele ukuba ukusetyenziswa kobhedu kunyuke ngama-250% ngowama-2030.
Ngamafutshane, le mfuno inyukayo yenza ukuba urhwebo lobhedu lube yindawo yexabiso yeeasethi enokuthi iqwalaselwe. Kananjalo, eli inokuba lixesha elifanelekileyo lokuba ujonge isinyithi.
Kwesi sikhokelo, siza kukuhamba nge-ins kunye nokuphuma kwendlela urhwebo lobhedu olusebenza ngayo, yeyiphi imingcipheko kunye nezicwangciso ekufuneka zithathelwe ingqalelo, kwaye ngabaphi abathengisi abakwi-Intanethi ababonelela ngolu didi lweasethi luthandwayo.
Izinto eziSisiseko zokuThengisa iCopper
ICopper ilandela isiseko sokurhweba esifanayo sayo nayiphi na into yorhwebo, engumbono woqoqosho wokuthenga nokuthengisa ngenjongo yokwenza inzuzo.
Ucinga ukuba ixabiso lobhedu liza kunyuka
Kananjalo, uthatha isigqibo sokuthenga ubhedu
Ukunyuka kweCopper kwixabiso njengoko uqikelele
Uthengisa ubhedu ngenqanaba eliphezulu, emva koko wenze inzuzo.
Isicwangciso esichazwe apha ngasentla sibizwa njenge indawo ende, apho uthenga khona kuqala kwaye uthengise kamva.
Ngakolunye uhlangothi, ukuba ubucinga ukuba ixabiso lobhedu beliza kuwa, ubuzakuthatha i- indawo emfutshane. Le ndlela inokwenzeka xa urhweba ngeemveliso ezimele ixabiso lobhedu.
Njengoko usenokuba uqikelele, akusoloko kunokwenzeka ukuba urhwebe ubhedu ngokwimo yalo ebonakalayo. Kulapho iziphumo zivela khona. Ezona ndlela zixhaphakileyo zokufikelela kwintengiso yorhwebo lobhedu kubandakanya ukhetho, ikamva kunye neeCFD. Siza kungena kwizinto ezithile kungekudala.
Yintoni eqhuba iindleko zeCopper?
Ixabiso lobhedu lihanjiswe kukungalingani okukhoyo kunikezelo nakwimfuno yentengiso. Impilo eyomeleleyo yoqoqosho lwehlabathi ikhokelela ekunyukeni kwamaxabiso obhedu. Kwangelo xesha, uqoqosho olusokolayo lunemfuno encinci yobhedu kwaye ke -kuqhuba iindleko eziphantsi.
Ke ngoko, kubalulekile ukugcina iso kwizinto ezininzi ezinefuthe kuqoqosho lwehlabathi.
Kukho isizathu sokuba le ntsimbi ine-moniker kaGqirha ubhedu kwimarike. Ifanelwe i-PhD, ngenxa yesakhono sayo sokuba sisalathiso sempilo yezoqoqosho.
Ukuba uqoqosho lwelizwe luyakhula, amaxabiso obhedu aya kuthi abonakalise iimfuno zeshishini. Kananjalo, ukuphuhliswa kweziseko zophuhliso yenye yezona zinto zibangela amaxabiso obhedu.
Eyona dipozithi inkulu emhlabeni isasazwa phakathi kweChile, iAustralia, iPeru, iMexico neMelika. Abathengi bayo abaphezulu yiTshayina, kunye nezinye iimarike ezikhulayo ezinje ngeIndiya neBrazil. Ubhedu luqhele ukusetyenziswa kwimveliso, amandla, unxibelelwano ngomnxeba kunye namacandelo ezothutho.
Njengoko amazwe etyala imali kuhlumo lwawo lwezoqoqosho, kukho unxibelelwano ngqo kwimfuno yobhedu. Ukwenza umzekelo, i-China i-akhawunti ye-46% yelizwe ityiwa ngobhedu.
Ke ngoko, nakuphi na ukwenzeka kwimeko yezentlalo nezoqoqosho ezichaphazela ukukhula kwe-GDP yase China nako kuya kuba nefuthe kwixabiso lobhedu. Kwiphepha le-flip, amaxabiso obhedu aya kuthatha ukubetha ukuba kukho ukuhla kwezoqoqosho.
Ukutshixwa kwendyikityha ye-COVID-19 ngumzekelo omnye wendlela imeko-bume yezoqoqosho nentlalo jikelele enokuthi ichaphazele ngayo ishishini lobhedu. Uthelekiso lonyaka lwemveliso yePeru yehle nge-23% phakathi kukaJanuwari noMeyi 2020. Emva koko ubunesitayile se-Chile eChuquicamata mgwayimbo we-2019.
Ukongeza, iintlekele zendalo ezinje ngezikhukula, iinyikima, okanye ukuwa komhlaba kunokuchaphazela imveliso yezemigodi. Iimpikiswano kunye nokucinywa kwemigodi kuya kuthi kuthintele ukubonelelwa, okuthetha ukuba ibango liphezulu kunye nokunyuka kwamaxabiso obhedu.
Intengiso yeZindlu yaseMelika
Ubhedu lusetyenziswa kakhulu kulwakhiwo e-US ngenjongo yokufaka iintambo zombane, imibhobho yamanzi, ukufulela kunye neminye imisebenzi.
Oku kukwenza phantse i-50% yobhedu bebonke obusetyenziswe kwilizwe. Kananjalo, abo babandakanyeka kurhwebo lobhedu kuya kufuneka babeke esweni izinto ezichaphazela intengiso yezindlu, kubandakanya ne-GDP yaseMelika.
Ezinye iindlela zeCopper
Ukutshintsha enye into kuqhelekile kuzo zonke iimarike ukuze ufumane ezinye iindlela ezingabizi.
I-Aluminium ihlala ikhethwa njengendawo yokubuyisela ubhedu kwizixhobo zombane, kunjalo ke nge-nickel, ilothe kunye nentsimbi ngokuxhomekeke kwinjongo. Ngokwendalo, tuzisa ukwehla kwixabiso lobhedu.
Libalwa njani ixabiso leCopper?
Ukuba ufuna ukurhweba ngobhedu kwimeko yalo ebonakalayo, unokufumana isinyithi ngohlobo lweebhiliyoni, imivalo okanye iingqekembe. Ezi zinobunzima bee-ounces, iitoni, iikhilogram, okanye iigrama. Kodwa njengoko unokucinga, ukuba ngumnini kunye nokuthengisa iibhiliyoni zethusi ayingomsebenzi olula.
kuba yorhwebo ntengiso, Ubhedu luhlala kusetyenzwa ngalo kwizinto ezinje ngokukhetha, ikamva, ii-ETFs, kunye neeCFD. Ixabiso lobhedu luboniswa ngokubanzi kwiidola zaseMelika; njengoko iGreenback yimali ebhentshini yokuthengisa kurhwebo oluninzi.
Nangona kunjalo, kuxhomekeke kumthengisi okhethiweyo we-Intanethi, uya kuba nakho ukufaka imali kwiakhawunti yakho ngemali yakho.
Ivula nini iMarike yoBhedu yeHlabathi?
Unokuzibandakanya kurhwebo lobhedu lwe-elektroniki iiyure ezingama-24 ngosuku evekini ngokungena kwiindawo ezahlukeneyo zotshintshiselwano kwihlabathi liphela.
Iimarike zorhwebo eziphambili zezi:
I-London Metal Exchange (i-LME),
Utshintshiselwano lweNew York Mercantile (NYMEX),
Utshintsho lweChicago Mercantile (CME), kunye
Utshintsho lweShailand lwexesha elizayo (SHFE).
Iimarike zethusi zihlala zivulekile ukusuka nge-10: 9 ukuya ngentsimbi yesi-XNUMX ngokuhlwa. Abahwebi banokungena kwezi marike ngabarhwebi abakwi-Intanethi abanokuthi babonelele ngokufikelela kutshintsho olwahlukeneyo.
Ndingarhweba njani ngeCopper?
Ukurhweba ngobhedu kwi-Intanethi kunokwenziwa ngeendlela ezininzi. Ukutsala kunye nokugcina izinto zethusi yenye yeendlela zokutyala imali kubhedu. Kodwa ngokuqhelekileyo, abathengisi baxhomekeke kule ntsimbi ngokusebenzisa iimveliso, eziyizivumelwano zezezimali ezibonisa ixabiso lobhedu.
Izitokhwe zokuThengisa iCopper
Izitokhwe zeCopper zithathwa njengendlela ethe ngqo kwiimarike zobhedu, kodwa eyingozi nayo. Uya kuba utyala imali kwiinkampani ezenza umgodi wobhedu ngokuthenga izabelo zazo.
Imbuyekezo yakho iya kuxhomekeka kungekuphela kokusebenza kakuhle kwemayini uqobo kodwa kunye nolawulo lwenkampani kunye neminye imiba eya kuba nefuthe kwimveliso yayo. Ngaphandle koko, iindleko zokufaka ezinje ngexabiso lezixhobo, kunye neoyile, zinokuchaphazela nexabiso lezabelo.
Amanye amagama abalulekileyo kwicandelo lezemigodi yobhedu yiTurquoise Hill Resources LTD (TRQ), iSouthern Copper Corp (SCCO), kunye neLundin Mining Corp (LUN).
Ii-ETFs zokuThengisa iCopper
IiNgxowa-mali eziThengiswayo eziThengiswayo (ii-ETFs) nazo zidweliswe kwiindawo zokutshintshiselana zikawonke-wonke - njengamasheya Ukwahlukana kukuba endaweni yokugxila kwiinkampani, ii-ETF zilandelela ibhasikidi yee-asethi ezifana nezitokisi ezilandela ixabiso lobhedu kwimarike.
Ukujonga, ezimbini ze-ETFs zobhedu ezihamba phambili yi-United States Copper Index Fund (CPER), kunye ne-iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN (JJC).
Isiseko esisisiseko sobhedu ETF Ukurhweba kukuba ukuba uthenga ii-ETF ze-CPER kunye nexabiso lobhedu linyuka, liya kuba njalo nexabiso le-ETF yakho. Ngokubalulekileyo, uya kuba nokufikelela kwizabelo zobhedu ngaphandle kokuba ube nesinyithi esikwimo yomzimba.
Ukurhweba ngeCopper CFDs
Esinye sezona zinto zisetyenziswa ngokuxhaphakileyo kwizinto zobhedu sisivumelwano somahluko okanye iCFD. Endaweni yokuthenga okanye ukuthengisa esona sinyithi, uyakube urhweba ngezivumelwano kunye nomthengisi obonisa ngokufanelekileyo ixabiso lobhedu kwimarike.
Ngokufana nezitokhwe okanye ii-ETFs, uya kuba ucinga ngexabiso lobhedu, kunye nendlela ekunokwenzeka ngayo ukuba yenziwe kwixesha elizayo.
Ukuzekelisa, nantsi indlela urhwebo lobhedu lweCFD olunokuthi luphume ngayo.
Ixabiso langoku lobhedu li- $ 3.50
Umrhwebi wakho unikezela nge-CFD ngexabiso lentengiso le- $ 3.50
Ixabiso lobhedu lihluma laya kuthi ga kwi-5.00 yeedola
Ngoku ii-CFDs ziya kuba nexabiso le- $ 5.00
Ukubeka nje, ii-CFDs ziya kuhlala zinexabiso elifanayo lobhedu. Kodwa endaweni yokuthenga ubhedu lokwenyani, utyalomali lwakho lumelwe ngezivumelwano.
Ii-CFDs nazo zinezibonelelo ezininzi kubathengisi bobhedu. Kunye, ziyabiza iindleko njengoko unokuthintela iindleko zothutho kunye nokugcina eyona mveliso.
Ngapha koko, bayakuvumela ukuba uzuze kungekuphela kumaxabiso anyukayo obhedu kodwa naxa iyehla. Oku kunokufezekiswa ngokunciphisa ii-CFD zakho zobhedu.
Masinike umzekelo kuwe.
Ubhedu okwangoku luxabisa i $ 3.50 ngeponti nganye
Ngokokuhlalutya kwakho, ucinga ukuba ixabiso lobhedu liza kuncipha kwisithuba sosuku okanye ezimbini
Ke ucela umthengisi wakho ukuba abeke iodolo ethengisa ixabisa i-1000 leedola
Ubunyanisile, njengoko ixabiso lobhedu liwa nge-2.5% ngosuku olulandelayo
Wenza inzuzo ye- $ 25 kwi-odolo yakho yokuthengisa (i-1000 yeedola x 2.5%)
Ngoku, enye i-perk yokusebenzisa i-CFD kukuba unokufaka isicelo kumashishini akho. Oku kuthetha ukuba unokuvula urhwebo ngaphezulu kakhulu kunokuba unakho kwiakhawunti yakho yomrhwebi. Uya kuthi uboleke imali kwi-broker ekuvumela ukuba urhwebe ngetyala.
Kulo mzekelo ungentla, ukuba ufake isicelo se-10x, inzuzo yakho ye- $ 25 iya kuphakanyiswa ibe yi- $ 250. Ngelixa ukuphakama kuyindlela elungileyo yokunyusa inzuzo, inokwandisa ilahleko-kwaye ngokukhawuleza.
Ngezizathu ezifanayo, ukunyusa nge-CFD akuvumelekile kumazwe amaninzi, kuquka ne-USA. E-UK nase-Europe, ubhedu lubekelwe umda kwi-1: 10. Ukuba urhweba nabarhwebi bobhedu abalawulwayo- ekufuneka ubenjalo, ngekhe ubenakho ukufumana amandla angaphezulu koku.
Ixesha elizayo lokuRhweba ngeCopper
Ixesha elizayo lobhedu lolunye uhlobo lwesivumelwano apho umrhwebi evuma ukuthenga okanye ukuthengisa isinyithi ngexabiso elithile ngomhla omiselwe kwangaphambili. Eli xabiso kuvunyelwene ngalo libizwa njenge ixabiso lokubetha.
Ngokwesiqhelo, ikamva lobhedu linomhla wokuphela kwalo obekelwe iinyanga ezintathu. Emva koko, amaqela achaphazelekayo anyanzelekile ukuba aqhubeke nokuthenga okanye ukuthengisa iimpahla njengoko kuchaziwe kwisivumelwano. Urhwebo kufuneka lwenziwe ukuba usabambe ikamva lokurhweba ngobhedu ekuphelelweni kwalo, nokuba intengiso iyaphikisana nawe.
Ngokufana neeCFDs, ikamva lobhedu lize lize namandla kwaye linokusetyenziselwa ukuthengisa okufutshane. Ekugqibeleni, ukungazinzi kwintengiso yobhedu kwenza ukuba ikamva libe yenye yeendlela zokurhweba ezintsonkothileyo kwaye ke, kufanelekile kubatyali mali abanamava.
Iinketho zeCopper Trading
Izinketho zeCopper nazo zivela kwixesha elizayo eliza kunye nomhla wokuphelelwa yisikhathi kunye nexabiso elithile lesiteleka. Nangona kunjalo, umahluko ophambili kukuba akukho sinyanzelo sokuba ugqibezele urhwebo ngokuphelelwa lixesha. Endaweni yokuba une kunene ukuthenga okanye ukuthengisa ubhedu.
Ukuba uyakholelwa ukuba ixabiso lobhedu liza kunyuka, uya kuthenga cZonke iinketho. Ukuba ucinga ukuba ixabiso liza kuwa, uya kuthenga ubhedu pukhetho.
Nanku umzekelo oza kukunika ingcaciso ngakumbi.
Uthenge ukhetho lokufowuna ubhedu oluphela emva kweenyanga ezintathu.
Ixabiso lesiteleka li- $ 5.00
Ukufikelela kwimarike, kuya kufuneka uhlawule i-premium ye- $ 0.50 ngomfowunelwa ngamnye
Umyalelo omncinci ziikhontrakthi ezili-1,000 500, yiyo loo nto ipremiyamu iyonke eyi- $ XNUMX
Xa ukhetho luphela, ubhedu luxabisa i $ 7.00- eyi- $ 2.00 ngaphezulu kwexabiso lesitrayikhi se- $ 5.00
Oku kuphumela kwinzuzo ye- $ 2,000 ($ 2 x 1,000 yeekhontrakthi)
Kuya kufuneka uthabathe ipremiyamu eyi- $ 500 oyihlawuleleyo, yiyo loo nto iyonke ingeniso ye- $ 1,500
Ngokubalulekileyo, ukuba ukhetho luphelelwe lixesha kwaye ubhedu lwalungaxabisi ngaphantsi kwexabiso lesitrayikhi le- $ 5.00- uyala ukwala ilungelo lakho lokuthenga. Uya kuthi ke uphulukane neprimiyamu yakho ye- $ 0.50 ngesivumelwano ngasinye.
Kwimeko apho ulindele ukuba ixabiso lobhedu liwe, ubuya kuthenga ukhetho endaweni yoko. Kananjalo, ukhetho lobhedu luyindlela yokwenza inzuzo kuwo omabini amaxabiso anyukayo nokwehla kobhedu.
Iindlela eziNtathu eziDumileyo zokuRhweba ngeCopper
Ngoku ukuba sisekele iindlela ezahlukeneyo zokurhweba ngobhedu ezikhoyo, ngoku sizakutshintsha ukugxila kwizicwangciso. Emveni kwakho konke, izicwangciso zorhwebo dlala indima ebalulekileyo ekukuncedeni ukuba wenze ingeniso engaguqukiyo, ebeka emngciphekweni umngcipheko.
Khumbula ukuba abarhwebi ababalaseleyo bayakwazi ukuziqhelanisa kwaye bakhethe isicwangciso esifanelekileyo esivumelana neemeko zentengiso ezikhoyo. Ngale nto engqondweni, apha ngezantsi sixoxa ezintathu zethusi eziqhelekileyo izicwangciso zorhwebo oko kunokukukhuthaza ukuba uyile inkqubo yakho.
Ukurhweba ngeCopper Swing
Abarhwebi beSwing bazama ukubamba ukunyuka nokuwa kobhedu kwithuba elifutshane. Oku kunokuba ukusuka kwiintsuku ezimbalwa ukuya kwiiveki ezimbalwa. Basebenzisa ithuba lokwahluka kweemarike, njengoko ixabiso lobhedu linyuka lisihla linyuka ngokujikeleza umgca wokuhamba phambili.
Impumelelo yolu hlobo lwentengiso ixhomekeke ekuhlalutyeni ubude kunye nexesha lolo lujingi, nasekuchazeni amanqanaba axhasayo kunye nokuchasana ngokuchanekileyo. Ukuba ukrokrela ukuba intengiso inyuke, uyayithenga loo asethi.
Okanye, ukuba ukrokrela ukuba ixabiso lobhedu liza kuwa, ungahamba ngokufutshane. Ngayiphi na indlela, uya kufuna ukugcina ubhedu lwakho Ukuguqula ukurhweba indawo evulekileyo okoko imeko nganye ihlala ikho.
INkxaso kunye neNqanaba loKhuselo
Amanqanaba enkxaso kunye nokuchasana zizigama eziphambili ezinceda abathengisi ukuba babone ukuba indawo yokuthenga okanye yokuthengisa yeyona ndlela ilungileyo yokuthatha isenzo. Kuhlalutyo lobuchwephesha, imigca yenkxaso ibonisa inqanaba lexabiso apho i-asethi inokuyeka ukuwa.
Kule meko, inqanaba lenkxaso yobhedu ngumda osikiweyo ngaphaya kwalo apho ixabiso lobhedu lingasayi kuncipha ngakumbi-ngokwendlela yembali. Ukuba wophula eli nqanaba, amathuba okuba ixabiso liya kuhla ngakumbi ukuhlangabezana nenye inqanaba lenkxaso.
Inqanaba lokumelana, ngokuchaseneyo, kulapho ixabiso lidibana khona nokuxhathisa njengoko liphuma. Ke ukuba uhamba ixesha elide ngobhedu, ufuna ukuseta inzuzo-ngaphambi nje kokuba ixabiso lisondele kweli nqanaba lokumelana. Kuya kubakho uninzi lwembali yenkxaso kunye nenqanaba lokumelana nobhedu, ezinye zomelele kunezinye.
The scalping Isicwangciso-qhinga sigxile ekusebenziseni utshintsho oluncinci lweemarike. Esi sicwangciso sokurhweba ngobhedu sisebenza kakuhle ngexesha lokungaqiniseki. Kungenxa yokuba ixabiso lobhedu kunokwenzeka ukuba lithengise ngaphakathi kwexabiso elithile.
Kwelinye icala, isikere singena kwaye siphume kwindawo ezininzi ngalo lonke usuku lokurhweba - siqinisekisa ukuba baxhamla kwixesha lokudityaniswa.
Nangona iithagethi zenzuzo zincinci kakhulu xa kusenziwa ubhedu, ezi nzuzo zinokongeza ngokukhawuleza. Ukongeza, ii-scalpers zihlala zisebenzisa amandla okuqinisekisa ukuba imida encinci iguqulela kwinzuzo esempilweni.
Iingcebiso zokuRhweba ngeCopper
Kuyo nayiphi na indawo yorhwebo yorhwebo, kubandakanya ubhedu, ulawulo lomngcipheko ludlala indima ebalulekileyo. Ukwenza oku, kufuneka kuqala uqonde ngokucokisekileyo kuzo zonke izinto ezichaphazela amaxabiso obhedu.
Ukukunceda apha endleleni, jonga ubhedu iingcebiso zokuthengisa sixoxa ngezantsi.
Funda iincwadi zokuThengisa iCopper
Iincwadi zokurhweba ezilungileyo kakhulu zingakufundisa ukuba intengiso yobhedu iguquke njani kuyo yonke le minyaka. Ezi ncwadi zihlala zithwala ulwazi malunga neendlela zokurhweba zabathengisi abanamava, kunye nezifundo abazifundileyo. Akukho sizathu sokuba ungazukufumana iingcebiso ezimbalwa eziluncedo kunye namanqaku okufunda kwezi ncwadi.
Ukuba awufumani isihloko esithile sobhedu, unokukhangela ezinye iincwadi zorhwebo ngokubanzi.
Incwadi yokuQala yoMthengi kwiZinto zikaCarley Garner
Iimbono zoRhwebo lweRhwebo nguRoy W. Longstreet
Iziphumo zeMveliso: Isikhokelo saBasebenzi bexesha elizayo nguPaul E. Peterson
UkuThengiswa kweMveliso ePhakamileyo ePhakamileyo nguCarley Garner
Ukuba ukufunda akuyiyo inqaba yakho, namhlanje unokufumana ukuqonda okufanayo okanye okungcono kokuthengisa ubhedu ngezifundo ezikwi-Intanethi. Ngenye indlela, zininzi iiwebhusayithi- ezinje ngezethu, ezinikezelwe ekufundiseni abathengisi apho uza kufumana amanqaku aza kukutyisa ngolwazi olufanelekileyo ngokuthengisa ngee-snippets.
Gcina umkhondo wentengiso yeCopper
Xa besikhankanyile ngaphambili izinto ezininzi ezinokuba nefuthe kwintengiso yobhedu, ingcinga yakho yokuqala inokuba uhlala njani uhambelana nayo yonke le nto? Ewe, ungasondela koku ngokudibanisa iindlela ezimbini, uhlalutyo olusisiseko kunye nohlalutyo lobuchwephesha.
Uhlalutyo olusisiseko lumalunga nokufumana ubungqina obucacileyo bezinto ezinje ngeemarike ezisakhulayo, uqoqosho lwehlabathi kunye nembonakalo yezopolitiko. Unokufumana ukufikelela kolu lwazi ngokulungiselela izixhobo zakho zeendaba kwiiwebhusayithi zemali.
Njengokuba ibali elinye leendaba lilodwa linokuba nefuthe elikhulu kwisicwangciso sakho sokurhweba, sicebisa ukuba uvule izilumkiso kunye nezaziso ukuze ungaphoswa naziphi na iziqwenga zolwazi.
Uhlalutyo lobuchwephesha lubandakanya ukusebenzisa isoftware ene-algorithms eyilelwe ngokukodwa ukufunda iimarike. Oku kunceda abathengisi ukuba baqonde into enokwenzeka kwixesha elizayo ngokusekwe kwimbali.
Ukuqonda uhlalutyo lobuchwephesha kunokudinga ixesha kunye nomzamo kwicala lakho, njengoko kunzima nakwabarhwebi abanamava. Oko kwathethi, kukwakho nabarhwebi abasekele uphando lwabo ngokupheleleyo kuhlalutyo olusisiseko.
Sebenzisa imiqondiso yokuthengisa ubhedu
Kungabonakala ngathi urhwebo lobhedu lufuna ukuzinikezela ngokusisigxina. Emva kwayo yonke loo nto, kuya kufuneka uhlale uphezulu kwiimarike, wenze uhlalutyo kwaye ulungele ukuthatha inyathelo ngonqakrazo lweqhosha.
Ngethamsanqa, enkosi kwimiqondiso yokurhweba ngobhedu, unokufumana ulwazi olufanelekileyo kwintengiso kunye nezinto ezinokuthi zenziwe zivela kumntu wesithathu ngexesha langempela.
Kwabo bangaziyo, imiqondiso yokurhweba zizinto ezinokubangela ukuba ubeke okanye uthengise iodolo esekwe kwiikhrayitheriya ezichazwe kwangaphambili. Amaqonga ahlukeneyo orhwebo asebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokuthumela umqondiso ngamnye.
Umzekelo, thina kwiLearn 2 Trade isiseko semiqondiso yethu kwindibaniselwano yezalathi zobuchwephesha- ezinje ngamanqanaba okubuyisela eFibonacci, amanqanaba enkxaso kunye nokumelana, amaqela eBollinger kunye nomndilili wokuhamba.
Sikuxelela ukuba loluphi ungeno kunye nokuphuma kweeodolo ozibeka ngeTelegram ngexesha lokwenyani, kubandakanya inzuzo oyithathayo kunye nelahleko yokumisa. Ngokwenyani, uya kuba nakho ukubeka amashishini ngokusekwe kwezi miqondiso zodwa, ukonga ixesha kunye nomzamo.
Sebenzisa uphawu lweTrader Trader
Enye yeendlela ezilungileyo zabarhwebi abatsha bokufunda urhwebo lobhedu kukulandela iingcali ebaleni. Abarhwebi abambalwa abakwi-Intanethi banikezela ngesixhobo seKopi soMrhwebi esivumela ukuba uxelise ukuthenga kunye nokuthengisa iiodolo ezibekwe ngabathengisi abanamava ngobhedu. Uya kutyala imali ethile kumrhwebi ngamnye, kwaye ukubuyisela, khuphela iphothifoliyo yabo-efana-nayo.
Unokukhetha umrhwebi ofuna ukumkopa ngokusekwe kwintsebenzo yabo, kwiiklasi zeeasethi eziphambili, nakwiipateni zomngcipheko. Ukukunika umzekelo, inqaku le-eToro's Copy Trader likuvumela ukuba ubonise umtyali mali wakho omkhethileyo kwi- $ 200 nje.
Ubhedu boRhwebo kusetyenziswa iiAkhawunti zeDemo
Iiakhawunti zedemo yinto enqwenelekayo phakathi kwabarhwebi abakwi-Intanethi namhlanje. Oku kuza kuqala kulayishwe ngemali yamaphepha oyisebenzisayo ukwenza ubuchule bakho kunye nezicwangciso. Nokuba abathengisi abanamava kakhulu basebenzisa isoftware yedemo ephindaphinda iimeko zentengiso yokwenene ukuvavanya iinkqubo zabo zokurhweba.
Oku kuya kukunceda uqhelane nonxibelelwano lwesiza somrhwebi, izixhobo ezininzi ezifumanekayo kuphando, kunye nokuthengisa ngaphandle kokubeka emngciphekweni imali yokwenyani.
Iimpawu eziphambili: Ukufumana uMrhwebi oPhambili woRhwebo ngeCopper
Ukukhetha i-broker efanelekileyo yokurhweba kuwe linyathelo elibalulekileyo elifuna ukucinga. Ngobuninzi bezinto onokukhetha kuzo phaya, kunokuba nokudideka ukuba umrhwebi omtsha akhethe umrhwebi ofanelekileyo kwimidla yabo.
Ngokufana nayo nayiphi na into, inkqubo yokukhetha umthengisi wakho wobhedu nayo inokulandela ikhrayitheriya. Kananjalo, ngokubhekele phaya ezantsi kwesi sikhokelo sixoxa ngamanye wabarhwebi abakwi-Intanethi ababonelela ngezixhobo zokuthengisa ubhedu.
Ngaphambi koko, makhe sihlolisise ezona zinto zibalulekileyo ekufuneka uziqwalasele xa ukhangela umrhwebi othengisa kakhulu wobhedu.
Ukurhweba kunokuba yinto eyoyikisayo, nkqu nakumrhwebi onamava. Nokuba uthengisa ngemali encinci okanye izixa ezikhulu, kungcono ukuba unamathele kubarhwebi abanelayisensi ababonelela ngokhuseleko kunye nokwenza izinto elubala.
Imigangatho yolawulo ikho ukuqinisekisa ukuba kwinqanaba lokudlala labo bonke. Baneseti yemithetho yokukhusela bobabini abathengisi kunye nabarhwebi. La maqumrhu anokujonga abarhwebi kwimimandla ethile.
I-FCA e-UK, i-ASIC e-Australia, i-CySEC e-Cyprus, i-FINMA eSwitzerland, kunye ne-SEC e-US zimbalwa phakathi kwezona ndawo zaziwayo zolawulo kwihlabathi liphela. Xa umrhwebi enelayisensi yomnye waba balawuli, oko kuthetha ukuba banokusebenza ngaphakathi kolawulo olunikiweyo lokuba bayayilandela imigaqo nemigaqo efunekayo.
Imirhumo yokuRhweba ngeCopper
Imirhumo yokurhweba yindlela amaqonga akuhlawulisa ngayo ngeenkonzo zawo kwaye yahluka ukusuka komnye umrhwebi uye komnye. Kananjalo, ukujonga ubume bemirhumo yomthengisi yenye yezinto zokuqala ekufuneka uzenzile.
Ngelixa abanye abarhwebi benikezela ngemirhumo efanelekileyo, abanye bayabiza. Eyona ntlawulo iphambili yokurhweba ngobhedu ekufuneka uyiqwalasele zidweliswe apha ngezantsi.
Iikomishini zokurhweba yimirhumo esemgangathweni ehlawulwa ngabarhwebi phantse kuwo onke amacandelo. Nangona kunjalo, okoko ukurhweba kwahamba kwi-Intanethi, uninzi lwabarhwebi luye lwagqiba kwelokuba zinciphise ikhomishini. Kananjalo, ayimangalisi into yokuba ufumene umrhwebi onika i-zero-commission kurhwebo lobhedu.
Apho ikomishini are ukubandakanyeka, kunokuba ngumrhumo wexesha elinye kurhwebo ngalunye, okanye kwiodolo nganye. Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka uhlawule ikhomishini xa uvula isikhundla kwaye kwakhona xa usivala.
Endaweni yemali eqingqiweyo, iikhomishini zomthengisi zihlala zihlawuliswa njengepesenti.
Umzekelo, masithi umrhwebi wakho uhlawulise i-2% kwikhomishini yakho yobhedu. Oku kuthetha ukuba ubambisa i-1,000, 20 yeedola kumyalelo wobhedu wokuthenga, kuya kufuneka uhlawule i $ XNUMX njengekhomishini
Ezinye iindlela zokurhweba, ezinje ngokurhweba ngokurhweba, zifuna ukuba ugcine indawo ivulekile ubusuku bonke. Olo shishino luya kufuna ukuba uhlawule umrhumo wobusuku, kungenjalo ubizwa ngokuba yimali yokutshintsha.
Iyafana nomrhumo wenzala owubhatalayo kumthengisi ukuze ugcine indawo ivulekile kuwe. Abanye abathengisi banokukuhlawulisa imali ephezulu yokutshintsha ngeempelaveki. Kwimeko apho ugcina ixesha elide livulekile, ezi ntlawulo zasebusuku zinokongeza ngokulula kwiimali ezininzi.
Abanye abathengisi bezorhwebo bayakuhlawulisa umrhumo emva kwexesha lokungasebenzi kwiakhawunti yakho. Yithi, ukuba awuzange uthengise iinyanga ezintandathu okanye unyaka, isixa esithile siya kutsalwa kwiingxowa-mali zakho zorhwebo.
Ukuba uyazi ukuba awuzukusebenzisa iakhawunti yakho yorhwebo kangangexesha elithile, ke, kungcono ukuba urhoxise imali yakho.
Intlawulo yokuGuqulwa kwemali
Njengoko besigqibile ngaphambili, uninzi lwentengiso lwenzeka ngeedola zaseMelika. Ngelixa uninzi lwabarhwebi abakwi-Intanethi likuvumela ukuba ubeke imali kwezinye iimali, banokunyanzelisa umrhumo wokuguqula ukuze utshintshe imali kuwe.
Nokuba ungumqali okanye umrhwebi oqeqeshiweyo, uyilo lweqonga lokurhweba ngobhedu lungenza ukuba inkosazana ibe lula okanye inzima kuwe.
Ukuhamba ngokutyibilikayo kuguqula amava angcono kwiqonga, apho izibonelelo zifikeleleka ngokulula, kwaye awunyanzelekanga ukuba uphande kakhulu ukufumana indawo yentengiso oyifunayo.
Xa uthengisa ubhedu ngomthengisi okwi-Intanethi, kuya kufuneka kuqala ubeke imali kwiakhawunti yakho. Abarhwebi abagqwesileyo baya kuba neendlela ezimbalwa zokuhlawula onazo, kubandakanya amakhadi ebhanki kunye nokudluliswa kweengcingo. Banokudibana nomntu wesithathu ekuvumela ukuba ungeze imali nge-e-wallets ezinjengePayPal, iSkrill okanye iNeteller.
Kananjalo, qinisekisa ukuba umrhwebi uyayixhasa intlawulo oyikhethileyo ngaphambi kokuba ubhalise. Ngelixa iidipozithi zihlala zikhululekile, abanye oosomashishini babiza imali encinci yokurhoxisa ukuze bakhuphe imali kwiakhawunti yakho yorhwebo.
Ngelixa unokukwazi ukunqanda iikhomishini xa urhweba ngobhedu, ngekhe ukwazi ukuthintela ukusasazeka. Kwilwimi yokurhweba, esi sisithuba phakathi kwexabiso lokubhida kunye nexabiso lokubuza lobhedu.
Ufuna ukunciphisa ubungakanani be sasaza Ukuqinisekisa ukuba ukwandisa inzuzo yakho. Umzekelo, abanye babarhwebi bethu abanconywayo babiza ukusasazeka kwe-2 kuphela iipipi kwii-CFD zethusi ngexesha lokubhalwa. Nangona kunjalo, khumbula ukuba ukusasazeka akulungisekanga; iyahluka kunye nokungazinzi kwintengiso.
Abarhwebi abaPhambili beCopper
Njengoko unokuthelekelela, kuya kufuneka wenze uphando oluninzi ukufumana umrhwebi wobhedu ohlangabezana neemfuno zakho. Awunalo ixesha lokwenza oku kwaye ufuna ukuqala ngokurhweba ubhedu ngoku?
Ukuba kunjalo, apha ngezantsi uzakufumana ukhetho lwamaqonga orhwebo ezorhwebo aphezulu esele ahlolwe liqela lethu apha kwi-Learn 2 Trade.
1. I-AVATrade-ziiCFD zeCopper yoRhwebo ezisasazekayo
I-AVATrade lelinye lamagama abalulekileyo kwicandelo lokurhweba kwi-Intanethi. Iqonga sele likho ngaphezulu kweshumi ngoku kwaye lazakhela igama elomeleleyo ngeelayisensi ezivela kwi-ASIC, i-FFAJ, i-FSCA, i-ADGM, kunye ne-FSA. I-brokerage ikwabonelela ngokusasazeka kakhulu kukhuphiswano lwee-CFDs zobhedu.
Ukuba uthembele kuhlalutyo lobuchwephesha, uyakonwabela ukwazi ukuba i-AVATrade idityaniswa ngokugqibeleleyo neMetaTrader4 kunye ne-5.
Kukho iitoni zomxholo onolwazi phaya, kunye neakhawunti yedemo yokuzibandakanya kurhwebo lwamaphepha. Ungabhalisela iakhawunti yokuthengisa ngobhedu ubuncinci beedola ezili-100.
Ukuphakama kwe-1: 10 kwintengiso yempahla
2. I-Capital.com -iKhomishini-yasimahla kunye noKhuphiswano ekusasazeni kwiCopper
I-Capital.com ikuvumela ukuba uthengise ubhedu ngokusebenzisa ii-CFD zempahla. Okanye, unokuthengisa i-stock CFDs yeenkampani zemigodi yobhedu ezifana ne-Southern Copper Corp. Ivunywe yi-FCA, i-CySEC, i-ASIC, kunye ne-NBRB, i-brokerage okwangoku inabathengi abangaphezu kwe-700,000.
Idumela elihlonitshwayo nexesha kunye nobungcali beCapital.com ziyabonakala kwiseti yayo enkulu yezixhobo zabarhwebi abatsha. Oku kubandakanya iiakhawunti zedemo zeCFD, iikhosi zorhwebo, kunye neevidiyo zemfundo.
I-Capital.com yenye yabarhwebi abambalwa abaya kukuhlawulisa zero ikhomishini yokuthengisa ubhedu. Zikwabandakanya iindleko zeedipozithi kunye notsalo.
Kuya kufuneka uhlawule ukusasazeka kuphela, okukhuphisana kakhulu kweli qonga. Idipozithi encinci efunekayo yidola ezingama-20, iipawundi ezingama-20, okanye ii-euro ezingama-20, okanye nayiphi na imali okhetha ukuhlawula kuyo.
Izinto zorhwebo ngaphandle kwekomishini
Akukho asethi yemveli
Vula iAkhawunti kunye noMthengisi weCopper ngoku
Ewe, kuyakuthatha ixesha ukuba uzilungiselele ukurhweba ngobhedu njenge pro. Kodwa ungabhalisela iakhawunti kunye nomrhwebi okwi-Intanethi ngemizuzu nangona kunjalo.
Landela nje inyathelo eli-3 lokuhambahamba elichazwe apha ngezantsi.
Inyathelo 1: Bhalisa kunye noMthengisi weCopper
Ukuba sele ukhethe umthengisi wobhedu ukuba ubhalise naye, yintloko uye eqongeni uvule iakhawunti.
Ngokwenkqubo Yazi umThengi wakho (i-KYC) ephunyezwe yimibutho elawulayo, kuya kufuneka unikezele ngolwazi malunga nokuqinisekisa isazisi sakho.
Igama lakho elipheleleyo
Inombolo yefoni yakho
Isazisi esikhutshwe ngurhulumente esisemthethweni
Ngamanye amaxesha abathengisi bakucela ukuba uthumele isithombe sakho uphethe ikhadi lakho lesazisi ecaleni kobuso bakho. Oku kuphela ukunqanda ubuqhetseba besazisi kunye nokuthintela ulwaphulo-mthetho kwezemali.
Inyathelo 2: Yongeza iiNgxowa-mali kwiAkhawunti yakho yokuThengisa iCopper
Ukuze uqale ukurhweba ngobhedu, kuya kufuneka kuqala ubeke imali. Unokukhetha ukhetho lokuhlawula kwiindlela ezikhoyo, uqinisekise ukuba udibana nesixa esincinci sedipozithi esichazwe liqonga.
Inyathelo 3: Beka uMyalelo
Nje ukuba iakhawunti yakho iqinisekiswe, ungangena kwimakethi yokuthengisa yobhedu kwangoko. Unokuqikelela kwixabiso lobhedu nakwezinye iifom zalo, kwaye ubeke iodolo ngokufanelekileyo.
Ungalibali ukufaka zombini inzuzo kwaye ukuyeka ukulahleka kwee-oda ukunciphisa umngcipheko. Ukongeza, ukuba kunokwenzeka, sicebisa ukuba ufumane incasa yentengiso ngokuzama amashishini ambalwa ngokusebenzisa iakhawunti yedemo enikezelwa ngumrhwebi wobhedu.
Ezinye izinyithi ezilukhuni- ezifana negolide nesilivere, zinokubamba ixabiso eliphezulu kakhulu kunobhedu. Kodwa akunakulindeleka ukuba amaxabiso abo atshintshe ngokukhawuleza ngexesha elifutshane. ICopper, kwelinye icala, inokunyuka okanye yehle ngeepesenti ezinamanani aphindwe kabini kwiveki nje-ngokokungazinzi kwendalo.
Oku kuyenza ibe yeluncedo kakhulu kubarhwebi bempahla yexesha elifutshane kunye nexesha elide. Ngamanye amagama, a Umrhwebi onamava onokuthi avavanye ukuhla nokuhamba kwemarike yobhedu unamathuba amaninzi okwenza imali.
Ngale nto ithethwayo, nokuba ucwangcisa ukurhweba ngobhedu nge-CFDs, ii-ETFs, ikamva, okanye ukhetho-qiniseka nje ukuba ubuqondile ubungozi. Indlela elungileyo yokulwa isoyikiso sokulahlekelwa yimali engaphezulu kunokuba ubunethemba lokuhambisa ii-odolo zokulahleka kokuyeka kuzo zonke izithuba zokurhweba ngobhedu.
Ngaba ndingaluqhelisela urhwebo lobhedu ngemali yephepha?
Ewe unokwenza iakhawunti kunye nomthengisi okwi-Intanethi okunika ukufikelela kwiziko leakhawunti yedemo. Oku kuyakuvumela ukuba urhwebe ubhedu ngemali yephepha kuseto lwexesha lokwenyani.
Ndingarhweba njani ngobhedu kwi-Intanethi?
Njengoko ukuthenga kunye nokuthengisa i-bullion yethusi kukude nokusebenziseka, unokurhweba ngezinto ezinje ngee-CFDs, ikamva, okanye ukhetho. Ngenye indlela, unokutyala imali kwizabelo zeenkampani zemigodi yobhedu.
Ngaba ungathengisa ubhedu kwi-Intanethi kunye nomgangatho?
Phantse bonke abathengisi abakwi-Intanethi abanelayisensi banikezela ngexabiso lokurhweba ngobhedu. Kwiindawo ezininzi, isinyibilikisi sobhedu sifakwe ngo-1: 10.
Ndingathenga ubhedu olubonakalayo?
Ewe, ngokwethiyori, ungathengisa ubhedu ngokwendlela ebonakalayo. Nangona kunjalo, oko kuya kubandakanya iindleko ezongezelelweyo zothutho, i-inshurensi kunye nokunye. Utyalo-mali kwiziphumo zobhedu yindlela yokuphepha ukuxhalaba kwezezimali, izinto zokusebenza kunye nokukhuseleka kokuthenga ubhedu.
Ndingancedakala njani xa ixabiso lobhedu lisiwa?
Ukuba ufuna ukwenza inzuzo ngamaxabiso obhedu awayo, kuya kufuneka usebenzise umrhwebi okwi-Intanethi onika iiCFD. Emva koko, kufuneka ubeke i-odolo yokuthengisa kubhedu.